Ny Marriott Resorts any Mexico dia manambara ny talen'ny varotra sy ny marketing vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana any Mexico » Ny Marriott Resorts any Mexico dia manambara ny talen'ny varotra sy ny marketing vaovao
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • People • Tourism • Vaovao isan-karazany
Ny Marriott Cancun Collection, izay misy ny JW Marriott Cancun Resort & Spa ary Marriott Cancun Resort, dia nanambara ny fanendrena an'i Glaucia Canil ho talen'ny varotra sy ny marketing.
Amin'ny anjara asany vaovao, i Canil dia tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny ezaky ny varotra sy ny varotra.
Izy koa dia hamolavola paikady amin'ny fitomboan'ny vola miditra ary hiasa amin'ny marketing sy ny fifandraisana amin'ny daholobe.
Ny tanjona dia ny hiantohana ny paikadin'ny fandefasan-kafatra sy ny paikadin'ny fifandraisana sosialy.
Mpikambana efa ela tao amin'ny fianakavian'ny marika Marriott, ny fanendrena an'i Canil dia nitondra ny asany manontolo, nanomboka tamin'ny naha-concierge azy tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny JW Marriott Cancun Resort & Spa, Club 91.
Rehefa afaka telo taona, dia nandray ny fandraisam-bahiny sy ny fandrosoany mialoha any an-tranony izy firenena Brezila, toerana nanendrena azy ho Executive Executive ao amin'ny Renaissance Sao Paulo. Nandritra ny taonany tao, Canil dia nitana toerana varotra isan-karazany nefa nahatratra vokatra azo tratrarina sy fanomezam-boninahitra, anisan'izany ny valisoa nomen'ny filoha Circle sy ny Circle an'ny filoha.
Tsy ela akory talohan'izay Cancun Niantso an'i Canil niverina, rehefa nanaiky ny toeran'ny Sales Manager niaraka tamin'ny Marriott Cancun Collection izy tamin'ny 2016. Ny fanolorantenany ny fahombiazan'ny ekipany sy ny toeram-pialan-tsasatra, ny fahaizany, ary koa ny fahaizany mitarika matanjaka, dia nahatonga azy ho lasa talen'ny Varotra sy varotra ho an'ny rahavavy Resorts.
Rehefa tsy miasa izy, dia hita milomano ambanin'ny masoandro i Canil, mankafy ny moron-tongotr'i Cancun miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany vavy 11 taona.